जीवनशैली – Page2– Bihani Online
१३ जेष्ठ २०७४ १०:२८ May 28, 2017 bihani
के.पि खनाल क्षेत्र, अछाम, जेठ,१३- अछाम नेपालको सुदुरपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रमा रहेको सेती अञ्चलको पहाडी जिल्ला हो । अछाम जिल्ला नेपालमा १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा बिभाजन हुनु भन्दा पहिल्य अर्थात वि.स. २०१८ साल अगाडी सम्म ठूलो जिल्लामा रहेको थियो । यसमा अहिलेको डोटी, बझाङ, वाजुरा समेत रहेको थियो । त्यतिवेला प्रशासन हेर्नको लागी गौडा डोटीमा रहेको […]
१२ बैशाख २०७४ ०३:०१ June 20, 2017 bihani
बिहानी अनलाईन संवाददाता काठमाण्डौं,बैशाख १२– बिहानी अनलाईनका सिईओ दिपेन्द्र सारु मगर आज जापान जानु भएको छ । लामो समय देखि विभिन्न रेडियो, टेलीभिजन जस्ता संञ्चारमाध्यममा कार्यरत रहनु भएका बिहानी अनलाईनका सिईओ आफ्नो उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि जापान तर्फ प्रस्थान गर्नु भएको हो । उहाँले जापानको फुकुवका शहरस्थित निहोन् गोगाकु गाक्को विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नुहुनेछ । […]
बि पि खनाल लम्की कैलाली,फागुन ३-प्रेम र दिलमाया सानै देखिका साथि हुन । उनिहरु सधैं संगै खेल्ने, संगै पढने गर्दथे । बिस्तारै उमेर बढ्दै गयो । उनिहरु पनि अलि ठुलो कलासमा बढ्दै गए । गाउँमा कुनै राम रमिता हाेस या मेला पर्व उनिहरु संगै जान्थे । एकअापसमा सबैकुराहरु सेयर गर्ने गर्थे । लाग्छ उनिहरुमा बच्चैदेखि […]
२९ माघ २०७३ ०२:३८ February 11, 2017 bihani
एजेन्सी, माघ,२९ – मानिसहरु सकेसम्म आफ्नी प्रेमिका वा श्रीमती राम्रै होस् भन्ने चाहन्छन् । कतिपय त बिहे गर्ने बेलामा अनुहार राम्रो नभएकै कारण पनि पन्छिने गरेको समेत पाइन्छ । तर रुसमा सुन्दरी युवतीहरु पाइने देशको रुपमा चिनिएको छ । तपाई यो सुनेर चकितमा पर्नुहुनेछ कि संसारभरिबाट दुलही खोज्न मानिसहरु रुस पुग्छन् । खासगरी रुसमा चीनका […]
३ पुस २०७३ ०३:२३ December 18, 2016 bihani
पुस ३-अधिकांश महिलाहरु अाफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाहमा अाम पुरुषभन्दा बढी चासो राख्छन् । महिलाहरु पनि यस्ता पुरुषहरु मन पराउँछन् जो फिट र स्वस्थ रहन्छन् । यसका लागि पुरुषहरुले पनि अाफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु जरुरत हुन्छ । मनोवैज्ञानिकका अनुसार महिलाहरु पुरुषको यी कुरामाथि विशेष ध्यान राख्छन् । १. महिलाहरु यस्ता पुरुषहरुलाई ध्यान दिन्छन् जो दिनहुँ नुहाउँछन् । […]
एजेन्सी,मंसिर ३- मानिसहरु अाफू अनुकुल झुट बोल्छन् । कुनै न कुनै बेला झुट नबोल्ने मान्छे सायदै नहोला । तपाई झुट बोल्दा बोल्दै बिस्तारै झुट बोल्ने बानी पर्छ । जसले गर्दा तपाईलाई बेइमानी बनाउन समय लाग्दैन । तपाई त्यसबाट जति नै टाढा भागेपनि पछि झुट बोल्ने बानीले तपाईलाई उम्कन दिने छैन । एक अनुसन्धानले यस्तै खुलाएको […]
२८ भाद्र २०७३ ११:०५ September 13, 2016 bihani
धेरै मानिसलाई लाग्छ, अंकुरित गेडागुडी तथा सागसब्जी स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुँदैन, यसमा हानिकारक रसायन तथा विषाक्त पदार्थ हुन्छ । यो कुरा सत्य हुन सक्छ, तर लसुनको हकमा भने यो कुरा झुटो हो । टुसाएको लसुनले कोलस्ट्रल कम गर्दछ, मुटुसम्बन्धी बिरामी हुनबाट जोगाउँछ । यसैगरी छालामा हुने संक्रमण रोक्नुका साथै बन्द नाक खोल्न सहायक भूमिका निर्वाह […]
२८ भाद्र २०७३ ११:०२ September 13, 2016 bihani
हरियो खुर्सानीमा कैयन पोशक तत्वहरु पाइन्छ, जस्तै भिटामिन ए, बी(टऽ, सी, आइरन, कपर, पोटासियम, प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेड आदि । यति मात्रै होइन यसमा बिटा क्यारोटिन, क्रिप्टोक्सान्थिन, लुटेन( जक्सन्थिन जस्ता स्वास्थ्यवर्धक तत्वहरु पनि रहेको हुन्छ । यसो त सामान्यतया हरियो खुर्सानीको प्रयोग खानालाई स्वादिष्ट बनाउन हुने गरेको छ । जिब्रोको स्वादका लागि खाइने खुर्सानी हाम्रो स्वाथ्यका […]
२८ भाद्र २०७३ १०:५९ September 13, 2016 bihani
सेतो र चम्किलो दाँतले मानिसको सुन्दरतामा निकै ठूलो भूमिका खेल्छ । यस्ता मानिसहरु मुसुक्क हाँस्दा निकै नै सुन्दर देखिन्छन् । त्यसैले पनि दाँत सेतो र चम्किलो होस् भन्ने जो कोहीको चाहना हुन्छ । तर, प्रायले चाहँदाचाहँदै पनि दाँत पहेँलो हुनबाट रोक्न सकिरहेका हुँदैनन् । तपाईं पनि यस्तै समस्यामा हुनुहुन्छ, त्यसो भए यसो गर्नुहोस् । नुनमा […]
स्वस्थ जीवन र निरोगी शरीर कसले चाहँदैन र १ तर चाहेर मात्र स्वस्थ जीवन त पाईंदैन । यसको लागि हामीले हाम्रो जीवनशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । केही यस्ता सामान्य उपायहरु हुन्छन्, जसले हाम्रो जीवनमा महत्वपूर्ण फाइदा दिन सक्छ । हरेक दिन बिहान उठेर कालो नुन अथवा ढिके नुनलाई पानीमा घोलेर पिउनुहोस् । यस्तो पानीलाई अंग्रेजीमा सोल […]